Home Wararka Khasaare dhimasho & dhaawac leh oo ka dhashay dagaalkii ka dhacay Muqdisho
Khasaare dhimasho & dhaawac leh oo ka dhashay dagaalkii ka dhacay Muqdisho
Dagaal ayaa dhex maray ciidamao kawada tirsan Dowladda Federaalka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa la soo sheegayaa in uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhawac. Iska hor imaadkan ayaa u dhaxeeya Ciidanka Harmacad iyo kuwa Militiriga , waxana dagaalkan uu saameyn ku yeeshay adeegyadii ka jiray isgoysyada Banaadir iyo Soobe
Sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka, dagaalkan ayaa salka ku haya muran ka dhashay , dhul ku yaalla dhabarka dambe ee Masjidka Cabdullaahi Ciise ee Banaadir. Askar ka tirsan Dowladda Federaalka ee dagaalka uu dhaxmaray ayaa la sheegay in ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhawaacmeen.
Taliye ku xigeenka ciidanka ah ee Harmacad Cabdixamiid Abdullaahi Fanax ayaa la xaqiijinayaa inuu ka mid yahay saraakiil ku dhaawacmay dagaalkan , waxa sidoo kale jira dad kale oo shacab ah oo waxyeelo ay soo gaartay. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha Dowladda Soomaaliya ee la xiriira dagaalkan.